Indawo yokuhlala esecaleni kweLake @ Skellig House
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguMatt And Katharine
Indawo yokuzimela ephezulu, eneplani evulekileyo enekhitshi elifakwe ngokupheleleyo, i-wi-fi, iTV ehlakaniphile, kunye neshawari ekwindawo entle yasemaphandleni ePhantsi. Ifakwe kwindawo entle yegadi enombono wechibi ukusuka kumnyango wangaphambili. Ngokufanelekileyo kufutshane ne-A1, yimizuzu nje engama-30 yokuqhuba ukusuka eBelfast kunye ne-90 mins ukusuka eDublin, isiseko esifanelekileyo sokuhlola i-Ireland, ukuhamba kwiiNtaba zeMorne, uhambo oluya elunxwemeni kunye neepubs zaseIreland.
Indawo yokuhlala ivulekile isicwangciso esinesofa ezitofo-tofo zokulala, ikhitshi elifakwe ngokupheleleyo, iwasha / isomisi, ibhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela le-en-suite. Kukho isignali ye-wifi elungileyo kunye ne-TV. Ibhedi yokukhenketha okanye iibhedi ezisongelwayo zinokubonelelwa abantwana xa beceliwe nangona kukho intlawulo eyongezelelweyo ye-£10 ngobusuku ngomntu ngamnye ohlawulwayo ekufikeni kwakhe.
IBarn ikwimizuzu nje emi-5 ukusuka kwidolophu encinci yaseDromore apho kukho izinto ezinje ngeevenkile zekofu, ivenkile enkulu, ivenkile yezipho kunye nee-pubs. IBelfast yimizuzu nje engama-30 kwaye iDublin yimizuzu engama-90 yokuqhuba.
43" HDTV ene-I-Netflix, I-Amazon Prime Video, I-Fire TV, izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Roku, intambo yepremiyamu
4.85 ·Izimvo eziyi-139
4.85 · Izimvo eziyi-139
I-Loft ikwimizuzu nje emi-5 yokuqhuba ukusuka kwidolophu yentengiso eyimbali yaseDromore enezinto ezininzi ezinje ngeevenkile zekofu, iivenkile zokutya okukhawulezayo, iivenkile ezinkulu, iivenkile zezipho kunye nee-pubs. Kuyacetyiswa ukuba ube nemoto njengoko umgama oziikhilomitha ezi-1 ukuya eDromore usecaleni kwendlela ephithizelayo kwaye ayihanjiswa zizithuthi zikawonke-wonke. I-Dromore ngokwayo inenkonzo efanelekileyo ngeebhasi eziqhelekileyo ukusuka kwindawo yentengiso ukuya eLisburn, eSprucefield naseBanbridge. ILoft yimizuzu emi-5 ukusuka kwidolophu eyimbali yaseHillsborough. Le yindawo entle yokutya ngaphandle okanye uhambe ujikeleze ipaki yehlathi yase-Hillsborough kunye nechibi. I-Hillsborough nayo ineZiko leNgcaciso yabaKhenketho eluncedo.
Iindawo zobuhle bendalo obubalaseleyo njengeeNtaba zeMorne, iinduli zeDromore kunye neStrangford Lough zikufuphi. Kukwakho nezakhiwo zeNational Trust (iMurlough Nature Reserve, iMount Stewart, iCastle Ward kunye neRowallane) zonke zifikeleleka lula.
Iziko elitsha labatyeleli loMdlalo weTrone kufutshane ne-Banbridge yimizuzu engama-20 kuphela yokuqhuba kwaye ukhenketho oludityanisiweyo lweMidlalo yeeTrone lubonakalise ukuthandwa kakhulu ziindwendwe zethu ezininzi! Kubantu abathanda imbali, ungaphoswa liZiko leTitanic elinomdla kunye ne'Troubles Tours' eBelfast.
Umbuki zindwendwe ngu- Matt And Katharine
Ababuki zindwendwe bakho, uMat & Katharine, baya kuba bekhona ukuze baphendule imibuzo okanye bancede ukusombulula naziphi na iingxaki. Sikwangumthombo olungileyo wengcebiso kwizinto eziluncedo zalapha kunye nemisebenzi. Nceda ungene emva kwentsimbi yesi-4 kwaye uphume ngaphambi kwe-10am. Nceda uqhagamshelane nathi ukuba ufuna ukungena ngaphandle kwala maxesha. Akutshaywa. Akukho maqela. Akukho zilwanyana zasekhaya. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye izimvo ongathanda ukuzibuza, ngoko nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
Ababuki zindwendwe bakho, uMat & Katharine, baya kuba bekhona ukuze baphendule imibuzo okanye bancede ukusombulula naziphi na iingxaki. Sikwangumthombo olungileyo wengcebiso kwizin…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dromore